Live Toos u daawo Munaasibada 12 ka Abril ee Sanad Guurada 59 aad Ciidanka xooga | Somalisan.com
Home Afsomali Live Toos u daawo Munaasibada 12 ka Abril ee Sanad Guurada 59...
Live Toos u daawo Munaasibada 12 ka Abril ee Sanad Guurada 59 aad Ciidanka xooga
12-ka Apriil 1960kii ayaa la aasaasay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waana markii dhidibada loo taagay Ciidan Difaac oo uu Dalku leeyahay, sidaasi darteed aan wax ka xusno taariikhdii aas-aaskii Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Waxaa la aas-aasay 12kii-April 1960kii oo waqtigan laga joogo muddo 59-sanadood.
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay afar talis oo kala ah: ciidanka dhulka, ciidanka cirka, ciidanka badda difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka.
Ugu horayntii markii la yagleelayay Millatariga dalka waxaa lagu aas-aasay 8 horimood,waxaana taliyihii ugu horeeyay ee uu yeesho noqday Allaha u naxariistee Gen. Daauud Cabdulle Xirsi, sidoo kale waxaa Abaanduulaha Xoogga Dalka loo magcaabay Allaha u naxriistee Gen. Maxamed Siyaad Barre, Waxaana ciidamadii ugu horreeyay ee Soomaaliya yeelato laga kala keenay labadii qeybood ee dalka ee ka xoroobay gumeystayaashi Ingriiska iyo Talyaaniga.
1976 waqtigaas oo ahayd hal sano ka hor dagaalkii 77 waxaa lagu tilmaami karaa xilligii uu ugu itaalka waynaa C.X.D wuxuuna ka koobnaa:-23 Guuto oo ciidanka lugta ah, 2 Guuto oo Komaandooska ah, 9 Guuto ooTaangi ah, 9 Guuto oo madaafiicda Goobta ah, 4 Guuto oo ciidanka Difaaca ah, Ciidanka Cirka dayaaradaha Soomaliya waxay ahaayeen 52 dayaaradood, 24 ka mid ah waxay ahaayeen Miig.
Munaasabadda 12-ka April ee sanadkan 2019ka oo ah sanadguuradii 59aad ee ka soo wareegtay aas aaska Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya, waxay ku soo beegantay xilli Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku tallaabsaday horumarro dhinacyo badan leh, islamarkaana ay socdaan qorshayaal kor loogu qaadayo Tayada iyo hoggaan wanaagga Ciidanka xoogga dalka.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya S/gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa maanta hambalyo u diray ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo maanta u dabaal dagaya sanadguurada 59 Aad ee kasoo wareegatay Aas Aaska ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
“Ugu horreyntii Anigoo ku hadlaya Magaca Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya waxaan HAMBALYO, HAMBALYO, leeyahay dhammaan ciidanka XDS iyo qoysaskooda, waxaan idin kugu hambalyeynayaa Sanadguurada 59aad ee aas-aaskii ciidanka XDS. XDS waxuu leeyahay taariikh soo jireen ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faani karaan”ayuu yiri Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka S/gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay tahay maalin qaali ah oo dalkeennu yeeshay ciidan difaaca jiritaankiisa iyo qaranimadiisa,
Munaasabada oo ku beegnayd 12 April ayaa loo soo horumariyay maanta oo khamiis ah 11-April 2019 sababta oo lagu sheegay in ay ku aaday Maalin Jimca ah ,sidaasi darteedna maanta ay ka socoto muqdisho xafladda lagu xusay Sanad-guurada aas-aaska Ciidanka xoogga Dalka taas oo ay ka qeyb-galayaan Madaxda ugu sareysa Dalka.
Previous articleDHAGEYSO: Faahfaahin dad shacab ah oo lagu laayay Shabeellaha Hoose
Next articleSomalia oo mudo dheer ka dib markab dagaal
Hogaamiyaha Maamulka Puntland iyo Wafdi uu horkacayo oo Muqdisho ka dagay
somalisannews - February 5, 2017
Ruux meyd ah oo ay dibada uga soo saareen dooxa hargeysa Ciidanka Dabdemiska Somaliland...
VIDEO Kenya: Army to Start Bombing of Boni Forest War Cusub Kenya oo sidey...